Hahita vanim-potoana vaovao ve ny fiaraha-miasa ao an-toerana aorian'ny Lockdown?
Home » Serivisy fampandrenesana tariby » Hahita vanim-potoana vaovao ve ny fiaraha-miasa ao an-toerana aorian'ny Lockdown?
Janoary 29, 2021
sary fandrakofana bludesks
Eo afovoan'ny Lockdown 3.0 any Angletera, moa ve ny fiaraha-miasa eo an-toerana no ho safidy ankafizin'ny mpiasa tsy miankina, mpanao gazety ary tompona orinasa kely?
LONDON, FANJAKANA MIASA, 29 Janoary 2021 /EINPresswire.com/ - Amin'izao fotoana izao amin'ny lockdown 3.0 any UK, dia marina ny milaza fa amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny olona dia efa nanapa-kevitra ny amin'ny sehatry ny asa any an-trano, nefa na dia misy tombony miharihary aza ho an'ny mpiasa, amin'ny lafiny malefaka dia misy lafiny maro mahatonga ny fahombiazana ao an-trano sarotra ho an'ny mpiasa marobe.
Ireo mpandraharaha eny amin'ny habakabaka malefaka dia tsy niadana ny hanaiky fa ao ambadiky ny antso matetika ataon'ny Zoom na Team dia misy ny adin-tsaina tena iainan'ireo mpiasa, manandrana mitazona sary matihanina manoloana ny fisavorovoroana sy ny fidinan'ny WiFi an-trano mahazatra.
Ny mpamatsy sehatr'asa dia sahirana eo am-panomanana ny zavatra hita ho fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny faran'ny taona, raha vantany vao manomboka mitondra ny tahan'ny aretina ny fihenan-tsasatra ary miverina ny fahatokisan-tena.
Tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana habaka Covid-Compliant tanteraka, fampahafantarana ny fampiasana habaka vaovao, amin'ny resaka toeram-piasana vitsy kokoa isaky ny faritra, ary koa ny mari-pamantarana sy ny fidiovana mba hampirisihana ny fahatokisan'ny mpampiasa.
Ny fiaraha-miasa eo an-toerana dia manana tombony marobe amin'ny birao an-trano, tsy latsa-danja amin'izany fa amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa matihanina, ny teknolojia sy ny fifandraisana dia matetika hatrany, mamela ny mpiasa tsy miankina, mpanao gazety, mpanamboatra sarimihetsika, mpandraharaha manana fampiharana mavesatra angona tsy tapaka.
Mazava ho azy, nandritra ny fanidiana hidin-trano ankehitriny, dia nihena ny fampiasana ivon-toeram-piasana lavitra any ivelan'ny trano, saingy mbola maro ny mpiasa no mahita fa mendrika ny hampiasa birao malefaka ao an-toerana ho an'ny asa ilaina, mahita izy ireo fa tsy azo atao ao an-trano izany.
Tsy ny fifandraisana fotsiny ihany, mpiasa marobe no tsy manana toerana ahafahana miasa sy mifantoka amin'ny tokony ho izy, matetika miseho amin'ny birao antso Zoom dia nipetraka teo am-pandriana na tao amin'ny efitrano malalaky ny olona ho toy ny atiny aorina!
Matetika ny biby fiompy sy ny ankizy dia miseho tsy misy fandaharam-potoana (na feo) mandritra ny fivoriana an-tserasera, izay vao mainka mampitombo ny toe-draharaha miasa an-trano (tsy lazaina intsony ny mpamily Amazon be mandondona, na ny vilany fanapahana trano).
Ny CEO jeneralin'i Unilever, Alan Jope, dia nanambara tamin'ny tapaky ny volana janoary tamin'ity taona ity fa tsy hiverina amin'ny birao intsony izy ireo, vakio eto ny lahatsoratra
Ho an'ny mpiasa marobe amin'ny orinasa toa an'i Unilever, izay manao tetikady stratejika mitovy amin'izany ny mpitarika, dia miteraka fihetseham-po mifangaro izany, izany hoe tian'izy ireo ny malefaka sy ny fahaleovan-tena fa tsy mankasitraka ny toerana tsy ampy ananan'ny birao any an-trano.
Raha ny marina, tao amin'ny lahatsoratra vao haingana navoaka tao amin'ny HR News avy amin'ny TopCV, serivisy fanoratana CV lehibe indrindra eran-tany, izay nanambara ny fikarohana fa ny mpiasa UK dia mila fanitsiana tsy tapaka avy amin'ny mpampiasa azy, miaraka amin'ny 7 isan-jaton'ny matihanina ihany no mametraka ny fiverenan'ny birao ho laharam-pahamehana ho an'ny 2021 . Jereo ato ny lahatsoratra feno
Ny fiasa miasa malefaka amin'ny toerana dia toa misy tombony ho an'ny mpampiasa sy ny mpiasa, satria manome ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa ho an'ny antoko tsirairay; ny fisondrotana vokatra bebe kokoa ary ny fihenan'ny vidin'ny birao maharitra ho an'ny mpampiasa, ary ny fanatsarana ny moraly sy ny fahasalaman'ny mpiasa ho an'ny mpiasa.
Mbola jerena ihany ny fandehan'ny zava-drehetra mandritra ny volana ho avy, saingy maro ny mpanara-maso mahita ny fiasa miasa ivelan'ny birao lehibe ho zavatra vao mainka hitombo ny fangatahana, na dia efa ela aza no tapitra ny famerana ny hidim-baravarana.
Raha tianao ny mamaky atiny misy ifandraisany amin'ny vondron'olona mpiara-miasa, na amin'ny maha mpandraharaha habakabaka malefaka anao, dia misorata anarana ao amin'ny newsletter anay ao bludesks.com
+ 44 2037453743
Tsidiho izahay amin'ny media sosialy:
Novakiana ihany ianao:
29 Janoary 2021, 08:36 GMT
Ny laharam-pahamehan'ny EIN Presswire dia ny mangarahara amin'ny loharano. Tsy avelanay ny mpanjifa mangalatra, ary manandrana mitandrina ny mpampanonta anay amin'ny famoahana votoaty diso sy mamitaka. Amin'ny maha-mpampiasa anao, raha mahita zavatra tsy hitanao ianao dia mba ampidino izahay. Tonga soa ny fanampianao. EIN Presswire, News Internet an'ny olon-drehetra Presswire ™, dia manandrana mamaritra ny fetra sasany mety amin'ny anton'izao tontolo izao. Azafady mba jereo ny anay Torolàlana fanoratana Raha mila fanazavana fanampiny.